Thenga iSpenbolone powder (5197-58-0) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Stenbolone powder (5197-58-0)
SKU: 5197-58-0. Udidi: abanye
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwintlawulo emininzi yeStenbolone powder (5197-58-0), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Stenbolone powder ividiyo
Stenbolone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Stenbolone powder
Umjikelezo wePenbolone powder
Amagama eKhemikhali: 2-methyl-δ1-4,5α-dihydrotestosterone (2-methyl-δ1-DHT) okanye njenge-2-methyl-5α-kunye-1-en-17β-ol-3-enye
Amanye amagama: iAnatrofin kunye neStobobolone,
Ukusetyenziswa kweStolbone powder
I-Stenbolone powder ivelisa i-steroid ethandwa i-Anadrol, i-Oxitosona (oc) kunye ne-Anapolon. Akumangalisi ukuba iStenbolone powder inesicelo esifana nezinye iimveliso ezintathu. I-syntex yavelisa i-Stenbolone ipowder eluhlaza njengenye indlela elula kunye nenkampani efanayo ne-Anadrol. Yaye inkampani yaphumelela kuba iStenbolone powder ayinayo inetyhefu okanye ayinayo i-aromatize, kwaye yinto encinci kuphela. Ukongezelela, kunomphumo ofanayo ku-Anadrol kwiimeko ze-anemia ezinokusetyenziswa kwegazi ezingavumelekanga ekubeni zandisa inani leeseli ezibomvu zegazi. Ngenxa yeso sizathu i-Stenbolone ipowder eluhlaza i-suit-capable for the athletes okukhuphisanayo kuba ikhawuleza ukuhlaziywa xa ixiliswa. Abakhi bomzimba abakhuphisayo kwiiveki phambi kokuba uqhubhiso lube nolwahlulo lwezigaba kunye neemeko zokuqeqesha. I-Stenbolone powder ibala ngokukhawuleza kwaye inokuthenjelwa oku kwaye ikunceda ukufumana ifomu elungileyo kuba ingagcini amanzi kwaye ayiyi kunyusa izinga le-estrogen. Nangona kunjalo, ukuxhotyiswa kwamandla kunye nobunzima, nangona kunjalo, i-Stenbolone powder eluhlaza ayifanelekanga njenge-Anadrol, nangona abanye belibiza ngokuba yi-Inadable Inadrol. I-Stenbolone powder inemiphumela engaphantsi kwe-anabolic kunye ne-androgenic kwimiphumo yomlomo kwaye ikhokelela kwisisindo esicothayo kodwa esomeleleyo sinokuzuza kunye nokufumana amandla okulinganisela. Kule njongo ikhethwa ngabasetyhini kunye ne-steroid novices, kunye nabadlali abadala abafumana iziphumo eziyanelisayo ngaphandle kokwesaba imiphumo ebalulekileyo. Nangona kunjalo, i-stenbolone ipowder eluhlaza, ngaphezu kwayo yonke into, ndiyi-stroid yokhuphiswano eqinisekiswa yi-American "Steroid Guru" uDaniyeli Duchaine kwincwadi yakhe ethi Underground Steroid Handbook 2: "Le yinto ephezulu kakhulu yokusebenzisa ukutya ngexesha lokutya ..."
Iyiphi inqanaba le-Stenbolone powder
Ekubeni i-Stenbolone powder ifom ye-acetate ifumane ixesha elide lokuphila kangangokuthi ii-injection eziqhelekileyo neziqhelekileyo ziyimfuneko ukwenzela ukuba ulungelelanise ngokwaneleyo ixabiso lezinga eliphezulu legazi. Ukufumana iziphumo eziphambili ze-Stenbolone powder ngokuqhelekileyo kuthathwa imihla ngemihla kwaye ijojowe ubuncinane zonke iintsuku ze-2. I-dose evamile yamasonto onke kubadlali be-200-300 mg. Ngenxa yeso sizathu i-50 mg isisombululo sikhethwa kwaye umgijimi okanye umqhubi uyalimaza yonke i-milliliter ampule imihla ngemihla okanye uvumele ukusetyenziswa kwisahlulo sawo. Ngokuqhelekileyo abafazi benza kakuhle nge-100- 150 mg / ngeveki kwaye kufuneka bahlule iiveli zabo zeveki zibe ziincinci ezintathu ezilinganayo. Iziphumo ezinokuthi ziphantsi ziphantsi ngenxa yokuba isakhi sinyamezeleke sisibindi kunye nemihla, i-gynecomastia, kunye negazi eliphezulu. Iimeko ze-acne kunye nokwanda kobudlova emadodeni aphantsi kwaye azinqabile, njengokuba kuncitshiswa kwimveliso ye-hormone yomzimba. Izimpawu zengcinezelo kubasetyhini nazo zenzeke ngokungaqhelekanga kwaye inxalenye enkulu kubantu abanentlonelo xa kunikwa i-dosage ephezulu okanye xa ixesha lokungena lihlala kwiiveki ezimbalwa. Azikho iifake kwi-stenbolone powder eluhlaza, ngoko ke akukho nxalenye yokuqala okanye ukuxelisa kungafumaneka kwi-market emnyama.
Umjikelo wesampula we-Stenbolone powder kubantu.
Iveki yeAnatrofin Testosterone
1 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
2 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
3 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
4 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
5 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
6 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
7 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
8 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
9 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
10 500mgs / iveki 250mgs / iveki 20mgs / edityaniswe 7caps / ed
Indlela iStenbolone powder isebenza ngayo
I-stenbolone powder ifana kakhulu ne-dromostanolone kunye ne-oxymetholone. Yimvelaphi ye-DHT kunye nokuxhamla kabini phakathi kwekhabhoni 1 kunye ne-2 kunye neqela le-methyl kwindawo ye-2. Iqela le-methyl kwisikhundla i-2 ikhusela i-molecule ukusuka kokubanjiswa kwe-orogen ukuya kwi-estrogen kunye nakwinqanaba elithile, ukungasebenzi kwimisipha ye-muscle nge-3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase. Eli qela le-2-methyl linciphisa ukubophelela kwi-androgen receptor ngandlela-thile. Oku kwenza i-molecule enokubambisana okungaphantsi kwe-androgen kune-primobolan kodwa njenge-primobolan, le steroid ayikwazi ukuguqulwa kwiimetabolites ze-estrogen nge-aromatization. I-stenbolone powder eluhlaza ithathwa njengabanye ukuba yi-inguqu ye-oxymetholone. Le steroid inesakhiwo esifanayo kwi-oxymetholone kodwa ayikho i-C-17 i-alpha alkylated ngoko ine-minimal effect kwimisebenzi yesibindi. I-Stenbolone powder yakha iiseli ezibomvu zegazi njenge-oxymetholone kwaye i-metabolized to degree in a dromostanolone eboniswe ukwandisa iiseli ezibomvu zegazi.
Iziphumo zecala ziza kuba ziphantsi, njengoko eli qela lingahambelani kwi-estrogen nonke. Ngako oko, iziphumo ezinjalo ze-estrogenic ezifana nokunyuka kwengcinezelo yegazi, ukulala, ukugcinwa kwamanzi kunye ne-gyno ngeke kwenzeke. Okuthakazelisayo ngokwaneleyo, i-anatrofin inempawu ezincinane kunye ne-androgenic, nangona kungenako ukuxhamla kwe-estrogen, okukhokelela ekubeni kunokwenzeka ukuba ube ne-acne, isikhumba esinamafutha kunye nokunyusa. Ngaloo ndlela, abafazi kufuneka baqaphele kule steroid.
I-Stenbolone i-powder yokuthengisa
Ngaba i-Stenbolone powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
I-Stenbolone powder eluhlaza ibonakala ingabangela ukufumana ubungakanani obuninzi njenge-anadrol okanye i-blot ebonakalayo kangangoko ayinayo imisebenzi engavimbelayo kwi-11-beta hydroxylase. I-Stenbolone powder yayilindele ukuba ijojowe imihla ngemihla ngenxa yexesha elifutshane le-acetate ester. Ukongezelela, i-acetate ester ibonakala ivelisa intlungu kunye nokuvuvukala kwisayithi yomjovo. I-Stenbolone powder eluhlaza inomsebenzi ofanayo kunye ne -rogenic uma kuqhathaniswa ne-1-testosterone, inguqu engagqithwanga yile chiza, kodwa kunye nemisebenzi ephezulu ye-anabolic. Oku kwenzeka ngenxa yokuguqulwa kwe-3-alpha hydroxy metabolites. I-Stenbolone powder inikezela ezininzi ezininzi iingenelo ze-oxymetholone ezinqabileyo kunye nokunyusa kwegazi.
Indlela yokuthenga iStenbolone powder evela kwi-AASraw
I-Stenbolone powder eluhlaza Iireyiki:
Izinto ze-8 ezibalulekileyo zePowderolone Powder